Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahrain » Mpitantana any Moyen Orient: Mitarika zotram-piaramanidina amin'ny 2021
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana Bahrain • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Chypre • Vaovao Mafana Egypt • Interviews • fampiasam-bola • Vaovao farany Iran • Vaovao Mafana Irak • Vaovao Mafana Jordanie • Vaovao Mafana Koety • Vaovao Mafana Libanona • Vaovao • Oman Vaovao Vaovao • Vaovao farany momba ny Palestine • People • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • Vaovao Mafana Arabia Saodita • Vaovao farany Syria • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Turkey Breaking News • Vaovao farany UAE • Vaovao isan-karazany • Vaovao farany momba ny Yemen
Ireo mpampijaly mavesatra ny sidina atsinanana Thierry Antinori, Waleed Waleed Al Alawi, Abdul Wahab Teffaha
Ny Afovoany Atsinanana dia nitana andraikitra lehibe amin'ny seranam-piaramanidina hatrizay, saingy tato anatin'ny folo taona izay vao tena niroborobo. Manova ny fomba fitetezam-paritany iraisampirenena ny olona, ​​mandray ny revolisiona lafo vidy ary mampifanaraka azy amin'ny filan'ny tsenany manokana.
Ny fenitry ny sidina afovoany Atsinanana dia mitondra fiononana, serivisy ary fampitaovana an-tsambo vaovao ho an'ireo mpandeha.
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina manerana an'izao tontolo izao dia voan'ny COVID-19 mafy sy ny fiovana rehetra eo aminy.
Nandritra ny 5 volana voalohany tamin'ny 2021, nidina manodidina ny antsasaky ny fahaiza-manao raha oharina amin'ny ambaratonga talohan'ny pandemia.
Ny angon-drakitra fifamoivoizana IATA tamin'ny martsa 2021 dia nampiseho fa ambany dia ambany ny 80 isan-jato raha oharina tamin'ny martsa 2019. Mitranga ny fanarenana, ary manomboka misokatra ny ankamaroan'izao tontolo izao, saingy mijanona ho fanamby ny làlana ho avy.
In vao haingana CAPA - Ivotoerana fiaramanidina hetsika mivantana, Richard Maslen, Tonian-dahatsoratry ny Votoatiny Eraopeana ho an'ny CAPA, dia nilaza hoe: "Tsy azo lavina ny fitarika amin'ny faritra rehetra amin'ny zotram-piaramanidina amin'ny 2021, 2022, ary na dia hatrany hatrany aza, dia ho hafa be noho ny teo aloha."
Vakio hatrany - na henoy - ity resaka mifampiresaka sy ara-potoana ity Ny sidina afovoany Atsinanana mpikatroka mahery vaika an'ny sekretera jeneralin'ny mpikarakara ny habakabaka arabo (AACO) Abdul Wahab Teffaha, ny lehiben'ny manampahefana misahana ny fanovana Qatar Airways Thiery Antinori, ary ny tale jeneralin'ny Air Air Acting Waleed Al Alawi.
Ny fiantraikan'ny COVID-19 dia nitaky ny seranam-piaramanidina rehetra hamerina handinika ny fizotrany, hanavao ary hanaraka lamina eran-tany vaovao. Tonga hatrany atsinanana atsinanana ny volavolan-tsainay mitsikera matetika tamin'ity volana ity ary faly izahay miaraka amin'Andriamatoa Abdul Wahab Teffaha, sekretera jeneralin'ny Fikambanan'ny mpitatitra arabo arabo, Andriamatoa Thiery Antinori, tompon'andraikitra ambony amin'ny lalam-by Qatar, ary Andriamatoa Waleed Al Alawi, izay tale jeneralin'ny Gulf Air. Ka heveriko fa tena zava-dehibe ny manomboka, ny fahazoana ny fahatakarana ny faritra eo an-toerana sy ny fomba nahavoa azy COVID tao anatin'ny 18 volana lasa. Ka Andriamatoa Abdul Wahab Teffaha, azonao atao ve ny manome fampidirana fohy anay momba ny fomba nahazoan'ny COVID ny atsinanana atsinanana sy ny seranam-piaramanidina Arabo ary inona ny zava-misy ankehitriny?
Ny fifanarahana ara-bola tsy miankina dia mitarika ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany manerantany...
St. Kitts & Nevis dia nandà ny fidiran'ny mpitsangatsangana avy ...
Lalàna vaovao miantso ny fihaonambe White House momba ny...
Manana ny ...